Calaamadaynta dunida dhabta ah - Geofumed
Calaamadaynta dunida dhabta ah
Luulyo, 2009 tabo cusub, Internet iyo Blogs
Tani waxaa lagu dhawaaqay maalmahaas ka mid ah bogga Jaamacadda Rey Juan Carlos. Waa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay moobilka kaas oo u ogolaanaya 'tag' dhab ahaantii dunida dhabta ah.
Iyadoo la raacayo, users xiri kara waxa ku multimedia in shay adigoo tilmaamaya telefoonka, dhegi ah calaamadda 'dalwaddii' on shay dhab ah iyo qofka ag maraaba wuu ka akhrisan kartaa. Taas oo dhan ka soo guuray. Taasi waxa ay kuu ogolaanayaa software free 'LibreGeoSocial' (LGS), barnaamij ay soo saareen cilmi at Rey Juan Carlos University ee telefoonada la Android, nidaamka qalliinka abuuray by Google. LGS waa mareegaha mawduucyada mawduucyada badan leh. Taasi waa, waxay u oggolaataa isticmaalaha shabakad bulsheed inay kaydiyaan macluumaadka (qoraalka, sawirrada, video, codka ...) oo ku xiran meel gaar ah. Iyo sidoo kale waxa uu leeyahay interface dhab ah laisplaned. Taasi waa, marka uu isticmaalo taleefanka gacanta oo ku saabsan shay hore loo calaamadeeyay, calaamad muujinaysa in qofka kale uu ka tagay "waxaa ka muuqda shaashadda.
"Tani waa waayo-aragnimo badan ka taajirsan yahay shabakad bulsho dhaqameedyada, sababtoo ah dareemayaal lagu qiyaaso duurka ku magnetic of telefoonada cusub kuu ma aha oo kaliya halkaas oo mobile, laakiin halkaas oo sidoo kale waxaa u janjeedha"
ayuu yidhi Pedro de las Heras Quirós, oo xubin ka ah kooxda GSyC / Libresoft iyo cilmi baarayaasha mashruuca. Waxa uu intaa ku daray: "Xaqiiqada dhabta ah iyo nidaamyada juquraafiyadeed ee LibreGeoSocial waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala shabakadaha bulshada in ay u soo baxaan si ay ula falgalaan oo keliya aduunka oo kaliya, laakiin sidoo kale aduunka dhabta ah." Tani waxay fureysaa adeegyo badan oo kala duwan: hagayaal dalxiis, nidaamka kaqeybgalka muwaadiniinta, shabakadaha bulshada ee dadka ku tiirsanaanta iyo fahamka.
Tusaalooyinka qaarkood: Qofka dalxiisku booqanayo madxafka, wuxuu tilmaamayaa telefoonkiisa gacanta sawir iyo faallooyin, sawiro, iwm. in dalxiis kale oo horay uu 'ku xayiray' sida ugu dhaqsaha badan ee farshaxankaas. Muwaadiniintu waxay arkayaan xayiraad ku saabsan inay dhacaan oo soo saaraan dhacdooyin ku xiran saqafka. Adeegyada dayactirka ee degmada ayaa si toos ah u heli kara macluumaadkan. Marka ay u soo guuraan meesha si ay u xalliyaan dhibaatada waxay si sahlan u heli karaan meesha ay ugu mahadcelinayaan muuqaalka dhabta ah ee la taaban karo. Intaa ka sokow, illaa iyo inta laga gaarayo, dadka kale ee isticmaala waxay ku heli karaan digniino taleefanadooda.
Arrintaas, degmadu waxay u adeegsan kartaa sahanka qodobbada xiisaha, sida calaamadaha, ganacsiyada, dhibcooyinka dariiqyada, waxyeelada jaangooyooyinka, iwm.
Laakiin LibreGeoSocial waxay soo bandhigaysaa faa'iido kale: waxay leedahay mashiinka raadinta ee semantic. Taasi waa, ka qanjidhada ee shabakadda (multimedia, dadka, dhacdooyinka ...) waxaa loo soo maro nidaamka algorithms dhafan si ay u xawilaan xiriirka non-cad u dhaxeeya, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si aad u hesho dadka isticmaala ama waxyaalaha kale ee ku saabsan shabakadda in ay la xiriiraan inkastoo ay ka tirsan yihiin bulshooyinka kala duwan ee shabakadda bulshada. Sidaas awgeed, tusaale ahaan, user ayaa abuuri kara shuruudaha raadinta si loo helo qof kale oo isticmaala goobaha isku midka ah ama uu leeyahay hiwaayad la mid ah.
LibreGeoSocial wuxuu ka kooban yahay server iyo codsi macmiil oo loogu talagalay moobaylka. Macmiilka waxaa lagu fuliyaa luuqadda barnaamijka Python. Codsiga macmiilka waxaa lagu baraa luqadda Java. Dhamaan server code source iyo macmiilka LibreGeoSocial ayaa la sii daayay sida software lacag la'aan ah, taas oo ah mid ka mid ah codsiyada ugu horeysay xaqiiqada qabsiyo for Android kuwaas code source waa la heli karaa, iyo mid ka mid ah dhawr jira la Sky Map iyo Wikitude. Codsiga macmiilka ayaa sidoo kale la heli doonaa si dhakhso ah iyada oo loo marayo suuqa suuqa Android, diyaar u ah in la soo dejiyo oo lagu dilo on telefoonada Android oo lagu iibiyo Spain by telefoonada ugu weyn ee taleefannada gacanta.
Post Previous«Previous Waa imisa qiimaha software ee blog-kan?
Post Next 3 waxay rabtaa maantaNext »